Pablo Zabaleta Oo Tilmaamay Shaxda Mudan in ay Argentin ku Ciyaarto
HomeWararka MaantaPablo Zabaleta Oo Tilmaamay Shaxda Mudan in ay Argentin ku Ciyaarto
21/06/2014 Khadar Dirir
Difaaca xulka qaranka dalka Argentina Pablo Zabaleta ayaa ugu yeedhay macallinka xulka qaranka dalkiisa Argentina Alejandro Sabella inuu sii wado shaxda ku dhisan weerarka saddexda hore isagoo shaaca ka qaaday in xulkiisa ay waajib ku tahay inay ka sii hormaraan guushii ay ka gaadheen dalka Bosnia-Herzegovina.
Argentina ayaa kulankodii furitaanka Koobka Adduunka waxay gegada Maracana 2-1 dhagta dhiiga ugu dareen xulka Bosnia, Argentina ayaa ku soo gashay qeybtii hore ee ciyaarta shax ku dhisan qaab ah 5-3-2.
Balse macallinka xulkaas Sabella ayaa shaxdaas wax weyn ka bedelay qeybtii dambe ee ciyaartaas isagoo ka dhigay 4-3-3, shaxdan ayaa ah shaxdii uu macallinka ku soo ciyaarsiiyay xulkan intii lagu guda jiray isreeb-reebkii Koobka Adduunka, Zabaleta ayaa aaminsan in dalkiisa uu raaxo daareemay markii isbedelkan uu macallinka la yimid“Waxaa jira had iyo jeer wax aad ku hagaajin kara. Haatan waxaan heysanaa fursad aan ku nasan karno ilaa iyo kulanka soo socda.”Ayuu yidhi Zabaleta waxaanu hadalkiisii sii raaciyey “
“Argentina waxay ku fiican tahay shaxda ah 4-3-3, maxaa yeelay? waa shax ku siinaysa dheelitirnaan wax weyna ka bedelaysa weerarkaaga, shaxdan waa midii nagu guuleysay inaan u soo baxno KA2014, runta waxay tahay haddii aad ciyaarto weerar ku dhisan saddex hore, waxuu qalqal gelinayaa kooxda ka soo hor jeeda, adiguna waxaad abuuraysa fursado wanaagsan.”